Posted By: KongoLisolowaa: Oktoobar 20, 2018 00: 00 No Comments
Haweenka madow, waxaad tahay dalxiis. Eye waa muuqaal. Haweeney madow: in aad tahay mid cajiib ah oo cajiib ah!
Boqorad midab leh "Copper" iyada oo awoodda aan xadidnayn. Qorraxda, qorraxduna waxay ku dhalaalaysaa melanin. Kaamil ah qiyaasta jacaylka, nabadda, nacaybka iyo xanaaqa.
Halyeeyga abuuritaanka Oludumare: Olodumare (Abuuraha) waxaa lagu magacaabaa Obatala (madaxa dharka cad) Ikole Orun (boqortooyadii awoowayaasha) maalintii uu doonayay inuu abuuro dhul qalalan oo ku yaal biyaha Ikole Aye (Dunida) )
Sep29 04: 14